Kedu otu esi eweghachi ngwaahịa na Amazon n'ụzọ kachasị mfe? | ECommerce ozi ọma
Kedu otu esi eweghachi ngwaahịa na Amazon?
A mara Amazon mgbe niile site na ịbụ ụlọ ọrụ nwere ọrụ na ndị ahịa ya na ndị na-eweta ya, Ọ bụ ya mere na-etinye ya na otu n'ime ọnọdụ kacha mma n'ụwa niile, na ngalaba azụmahịa e-commerceHa na-enwe ngwaahịa kachasị mma, yana ọnụahịa asọmpi na nkwa nke nnyefe ọsọ ọsọ, yana nkwụghachi ntụkwasị obi ma ọ bụrụ na ngwaahịa ha emezughi atụmanya gị.
Ebe ọ bụ na ihe kachasị mkpa bụ na ị nwere ezigbo onyonyo nke Amazon ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị kwụsị ịkwụsị itinye ego gị ebe ahụ, ma eleghị anya, n'oge na-adịghị anya ịkwesịrị ịzụta ihe ọzọ site na nke a, na mgbakwunye, iwe megide ụlọ ọrụ bụ ihe kachasị njọ nke nwere ike ime ya, ọ na - akpata okwu ọjọọ, nkatọ na enwere ike ntụkwasị obi nke ndị ọzọ fọdụrụ na ika ahụ, ya mere Belọ ọrụ mba ụwa Jeff Bezos anaghị etinye ihe egwu dị otú a egwu, na mgbe niile nye ọnọdụ dị mma ma dịkwa mfe iji weghachite ngwaahịa ọ bụla nke ahụ egbobeghị mkpa gị.
Ọ bụrụ na ị nwetara ngwaahịa, ma ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya, ma ọ bụ ikekwe ị nyere iwu na mberede na Amazon, ma ịchọrọ ịlaghachi, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị, ebe a ka anyị ga-akọwa: Etu ị ga-esi laghachi ngwaahịa a ma nata nkwụghachi nke ego gị ma ọ bụ mgbanwe ya.
1 Nzọụkwụ iji laghachi ngwaahịa na Amazon
2 Rịọ nkwụghachi nke ịzụta gị
3 Ga-abanye na etiti Amazon Return
Nzọụkwụ iji laghachi ngwaahịa na Amazon
Ọ bụrụ na ị chọpụta na ihe ahụ batara n'ụlọ gị abụghị ihe ị chere na ọ ga-abata, echegbula onwe gị, ihe kacha choro igwe ahia ahia ahia n'uwa, O nwere ezigbo ọrụ nloghachi, nke mere na, dabere na ndị na-ere na nhọrọ ikike, ị nwere ike iweghachite ego gị niile ma ọ bụ akụkụ nke ego ị kwụrụ.
Inwe ike iweghachi ngwaahịa ọ bụla na Amazon, ị ga-atụle na oge nkwụghachi na ụlọ ọrụ a bụ ụbọchị 30, site na nnata, yabụ na ị gaghị enwe ike itinye akwụkwọ ma ọ bụrụ na ihe karịrị oge a agafeela.
Cheta na ọ dị ezigbo mkpa na ị kwenyesiri ike na ngwaahịa ahụ abụghị ihe ịchọrọ, jiri ihe ị tụrụ anya na ị ga-enweta ya ma ọ bụrụ na ịchọghị ya ọzọ, n'ihi na ị nwere ike ịkwa ụta ma emechaa, tụlee na ngwaahịa ahụ sitere na ndị ikpeazu ma ị gaghị enwe ike ịnweta mgbanwe, naanị nkwụghachi, yabụ chee echiche ugboro abụọ tupu ebugharị ngwaahịa nke rutere n'ụlọ gị, Ọ gwụla ma ị kwenyesiri ike na ọ bụ ihe ị na-achọghị na agaghị emezu ebumnuche ya, oge eruola ịmalite usoro nloghachi.
Iji malite usoro ahụ, ị ​​ga-emepe ihe nchọgharị gị, tinye ebe nrụọrụ weebụ Amazon.
Mgbe ahụ ị ga- nweta ikpo okwu na akaụntụ gị na paswọọdụ gị na ị ga-aga na ngalaba na-ekwu Iwu m. Ọ bụ n'akụkụ a ebe ị ga-achọ usoro nke ihe ịchọrọ ibula dị, a ga-ahazi ha n'usoro oge ka ọ ghara isi ike ịchọta ya, ozugbo ahọpụtara pịa ebe ọ na-ekwu Nkewa ma ọ bụ dochie ngwaahịa, nke ga-akpọga gị na windo ọzọ.
Na windo na-esote, họrọ akara ngosi akara ala, ihe kpatara ya nke mere ka ị chọọ ịlaghachi isiokwu ahụ, ide ederede na mpaghara ederede bụ nhọrọ, mana ọ dị mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ ka ịkọwapụta nke ọma banyere ọdịda ngwaahịa ahụ, wee pịa ebe ọ na-ekwu Gaa n’ihu.
Ọ dabere na nke bụ ihe kpatara nloghachi gị ahọrọ na mbụ, Na ihuenyo ọzọ ị nwere ike ikwu mgbanwe na ihe ahụ, ma ọ bụ nha, ụcha, ma ọ bụ ọrụ, ihe ị ga - eme bụ izipu ngwaahịa ahụ ọzọ, yana mgbe obere oge gasịrị, a ga-agwa gị, ị ga-enweta ngwaahịa ọhụrụ ahụ, na-eche maka afọ ojuju gị zuru oke, ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịme mgbanwe ahụ ma ọ bụ laghachi ọzọ, atụla ụjọ ida ohere ị nweta ihe bụ nke gị n'ụzọ ziri ezi.
Nke ahụ bụ, ngwaahịa dị ka nke ị hụrụ na onyonyo na nkọwa, na web platform, Ọrụ Amazon bụ izitere gị ihe ị na-azụ, Njehie ọ bụla na nke a bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ wee hapụ gị ibu ọrụ, yabụ echegbula onwe gị, ị nwere ike weghachite ngwaahịa ọ bụla ọtụtụ oge dị mkpa, ruo mgbe afọ ojuju gị zuru.
Ọ bụrụ n ’ị chọkwaghị ịmatakwu gbasara isiokwu ahụ, nke rutere gị, ma ọ bụ na ị kwara mmakwaara ịzụrụ ya, ị nwekwara ike rkwuo nkwụghachi zuru ezu nke ego gị. Họrọ nhọrọ ịchọrọ ma pịa Gaa n’ihu.
Ghaghi iburu n'uche na oburu na ihe anaghị ere Amazon, kama azụrụ ya site na ụlọ ahịa dị iche iche wee zigara Amazon, Nloghachi gị nwere ike ịnwe onye na-ere ahịa kwadoro ya, yabụ usoro ahụ adịghị n'aka Amazon ma naanị ị ga-echere nkwenye ha iji nweta nkwụghachi gị ma ọ bụ laghachi.
Rịọ nkwụghachi nke ịzụta gị
Ọ bụrụ na ị họrọla ịrịọ nkwụghachi gị, ọ pụtara na ngwaahịa nke bịakwutere gị emeela ka ị ghara ịzụrụ ọbụna onye ọzọ nwere ọdịdị dị mma ma ọ bụ nwee ọnọdụ dị iche iche, ọ na-emekarị anaghị eme na ngwaahịa ndị Amazon na-ejikwa, mana ọ bụrụ na ị chere na ọ kachasị mma, na anyị enweghị ike ime ihe ọ bụla banyere ya iji melite nzụta gị, ị ga-enwe nhọrọ ịhọrọ usoro ịchọrọ:
Ma ọ bụ site na a Ihe onyinye onyinye Amazon, na-ga-akwụ ụgwọ na akaụntụ gị n'oge ha na-enweta gị laghachi ngwaahịa, ma ọ bụ họrọ na usoro ugwo omenala, bụ nhọrọ na-ewe n'etiti 5 na 7 ụbọchị iji weghachi ego ozugbo anatara ihe.
Na windo na-esote ị ga-ahọrọ n'etiti nhọrọ nloghachi dị iche iche dị. Enwere nhọrọ nke ị ga-ewegara ya ozugbo ma ọ bụ post ọfịs egosipụtara, ị nwekwara ike ịrịọ ka ndị ụlọ ọrụ ndị a bịa ka ha bulie gị n'ụlọ gị. Dabere na ngwaahịa na ị zụta na-ere ákwà, Ọrụ ahụ ga-abụ n'efu ma ọ bụ na a ga-ebo gị ụgwọ dabere na ọzọ nke nnyefe nke ngwaahịa a.
Ga-abanye na etiti Amazon Return
Mgbe ị mechara usoro a, Amazon ga-enye gị faịlụ na aha njirimara nke ị ga-ebipụta, bepụ na mado na ngwugwu ị ga-eziga. Otu n'ime aha ndị a ka ị ga-etinye n'ime ngwugwu ahụ, nke ọzọ ị ga-arapara na mpụga ngwugwu ahụ.
Mgbe ahụ, ọ ka ga-ewega ya na ngwugwu ma ọ bụ post ọfịs kenyere gị, ma ọ bụrụ na ọ bụ nhọrọ ị họrọ, ma ọ bụ chere ma ọ bụrụ na ị rịọrọ ka eburu gị n'ụlọ gị ozugbo.
Ozugbo Amazon natara ngwugwu gị, a ga-akwụ gị ego kwekọrọ na gị n'oge ekwuru na mbụ.
Amazon bụ otu n'ime ụlọ ahịa dị n'ịntanetị kachasị eji eme ihe n'ụwa niile, ma doo anya na ọ bụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu na Spain niile, ebe ọ na-adịghị arụ ọrụ ogologo oge, mana ọ gbajisịala ọtụtụ ndekọ ma gbasaa ebe ọ na-arụ ọrụ ebe ọtụtụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ.
Companylọ ọrụ nke Jeff Bezos kere nyere ọtụtụ uru mgbe ịzụrụ site na ya, ebe ọ bụ na ọ na-enye ohere ịzụrụ ihe ọ bụla, yana n'ezie iweghachite ya n'ụzọ dị mfe yana na-etinyeghị ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na ihe ị tụrụ anya na ngwaahịa ahụ rutere.
Anyị na-echetara gị na oge nloghachi kachasị ụbọchị 30, ọ bụ ezie na e nwere oge ụfọdụ n'afọ, nke oge a na-eme okpukpu abụọ. Iji nye otu ihe atụ, na Oge Krismas gara aga, Amazon gbatịrị oge nlọghachi na ngwaahịa ya, karịa ụbọchị 60, nke mere na onye ọ bụla nwere obi ike na ihe doro anya ịzụta n'echeghị na ha nwere oge dị mkpirikpi iji mee nloghachi na ahịa.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ihe ahụ ị rịọrọ bịarutere mebiri ma ọ bụ na ọ gbanyeghị, ọ bụrụ na ọ bịara na agba nke ị tụrụghị anya ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ iweghachi ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ ndị na-ekwekọghị., ị ga-enwe nhọrọ nke ịrịọ ka ndị ọzọ zite gị nha ndị dị mkpa. Ma ọ bụ na ị ghọtara na ngwongwo na ogo ngwaahịa a abụghị ihe ị tụrụ anya ya, ihe niile agaghị efu, ị ka nwere ike ịnweta nkwụghachi nke ihe ị kwụrụ maka ngwaahịa ahụ, ozugbo ọ rutere n'ọfịs Amazon. Otu n'ime nhọrọ ndị a agaghị egosipụta ụgwọ ọ bụla ọzọ n'akpa gị.
Naanị na ọ bụrụ na Amazon erebeghị ihe ahụ, usoro ahụ ga-adabere na onye na-ere ere, ebe Amazon ga-arụ ọrụ naanị dịka ngalaba intermediary.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịọ mgbanwe, oge echere ga-adị mkpụmkpụ ebe ọ bụ na Amazon na-eche banyere ogo nnyefe na ọrụ ndị ahịa ya, yabụ afọ ojuju gị na nzụta bụ ihe kachasị mkpa.
Gbalịa iji amamihe họrọ otu ị chọrọ isi weghachi ngwaahịa a, ugbua na imara ụzọ dị iche iche ị ga-esi mee ya, ị nwere ike ịnwe mkpebi amamihe karịa mgbe ị na-ahọrọ usoro nlọghachi maka ngwaahịa nke nhọrọ anyị.
Site na ịzụta mgbanwe ngwaahịa na nkwụghachi zuru ezu nke ego gị, yana Amazon ị gaghị enwe nsogbu ịnata ihe ịchọrọ naanị mgbe achọrọ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Kedu otu esi eweghachi ngwaahịa na Amazon?
Nduzi diaz dijo
Ehe, ahụbeghị m ụzọ m ga-esi bịa n'ụlọ m bulie ya.
Aghọtaghị m eziokwu. Dị ka ha si eweta ya, ha kwesịrị iziga maka nloghachi ahụ.
Enwere 2 tf nke atc. Ọrụ ndị ahịa na-abụghị. Onweghi uzo isi gha ama ama. Ya mere ATC eme nzuzu. Na Amazon kwa.
N'ihi na m nyere iwu ọtụtụ ihe na Decatlon na m natara ha tupu Anazon ma kwụọ ụgwọ maka ihe ndị m nyere iwu.
Nnukwu ihe dị iche ... n'ezie.
Obi anaghị adị m ụtọ na amazon.
Zaghachi Delia Diaz
Ya mere, ha anaghị anakọta nloghachi? imi imi, keduzi ihe anyị ga-eme ???????
Ndo, enweghị m ike ịkọ nkenke; Achọrọ m ogologo nkọwa:
- N'ihi afọ ndụ m enwere m ihe isi ike ịnagide tangle nke igodo ndị na-eso ụzọ ndị dị mkpa iji zụta n'ụzọ ziri ezi.
- N'ezie n'amaghị eme m zụrụ onye ọ na-emeghachi kwa ọnwa. Nke ahụ abụghịkwa ihe m chọrọ.
- Mgbe nke atọ ma ọ bụ nke anọ bịara, m jụrụ ya na ekele na ha kpọtụrụ m, n'ihi na ọ bụghị na ọ gaghị ekwe omume: Ọ bụ labyrinth nke na mbọ niile m furu efu: Nanị ihe ngwọta bụ ịjụ arịrịọ ahụ. Mgbe ọ bụla m nwalere ya site n’usoro ha, ha na-atụpụta otu n’ime azịza atọ ma ọ bụ anọ ọ ga-ekwe omume na nke metụtara m adịghị mgbe ọ bụla. Maka m ọ bụ ezigbo labyrinth, "mousetrap" nke mere ka iwe na-ewe m iwe. Ha kwesịrị imeghe ụzọ dị iche iche nke ịza anno ezigbo iwe, na-ewe iwe. Ọ dị ka ịgwa mgbidi okwu.
Ezequiel Puig onye nkuzi dijo
Ihe ngwugwu erutaghi aka m, ndi nke seur weghachitere ya
Zaghachi Ezequiel Puig farran
Rafael Fernandez Bellido dobere ihe oyiyi dijo
Amazon bụ onye kasị njọ, nke kasị njọ, nke kasị njọ, enwere. Ha nwere akwara iji dochie anya ndị ahịa na akwụkwọ mmado na-arịọ mgbaghara maka coronavirus. Anọwo m na-agwa ya okwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ, na-enweghị ihe ịga nke ọma n’agbanyeghi ọtụtụ ụzọ dị iche iche m chọrọ. Nloghachi bụ egwuregwu bara uru na katalọgụ nke ụgha. Anọ m na-eche ọnwa abụọ ka a nabataghachị m abụọ, nke ihe ndị ruterela mbụ tupu ebupụ ha. M ga-agba mbọ n'ọdịnihu ikwu okwu ọjọọ dịka m nwere ike maka ụlọ ọrụ a. Na n'ezie m ga-enye onye ọ bụla zụrụ ụzọ ọ bụla ọzọ ndụmọdụ.
Zaghachi Rafael Fernandez Bellido
Achọrọ m ịbịa bulie ya, mana oge agafeela ma ha emebeghị ya ma amaghị m ihe m ga-eme.
Kedu ka Facebook si arụ ọrụ?
Ndụ okirikiri nke ngwaahịa